crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Tira-koob: Dalalka ay kasoo jeedaan dhimaalladii Xajka | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka September 29, 2015	0 222 Views
Muqdisho – Iyada oo ay wali isasoo tarayso tirada dhimashada marba marka kasii danbeysa, warbixinnada warfidiyeenka ayaa tilmaamaya in ugu yaraan 1,100 qofood ay ku dhinteen burburkii Xajka oo ahaa kii ugu darnaa abid ee dhacdo-sanadeedka Xajka ka dhaca muddo rubuc qarni ku dhow.
Tiradaan cusub waxaa ku dhawaaqay dalalka Bakistaan iyo Hindiya kuwaas oo sheegay in dowladda Sucuudiga ay siisay diblomaasiyiin shisheeye ah xogta 1,100 oo ah sawirada meydadka laga helay burburkii Xajka ee toddobaadkii hore dhacay.
Tirada dhawaan-helka ah ee ay sii deysay wasaaradda caafimaadka Sucuudiga ayaa dhigaysa in 769-qofood ay dhinteen halka 934 oo dhaawacyo kala duwan qaba diiwaankooda lahayo.
Shilka ayaa dhacay Khamiistii hore markii boqollaal Xujeyda ka tirsanaa ay dhinteen—iyada oo ugu badnaan kun-qofood ay ku dhaawacmeen shilkaas oo ka dhacay banaanka hore ee magaalada barakaysan ee Makka oo Mina lagu magacaabo taas oo shan kilomitir ka baxsan Makka.
Burburka ayaa ah dhacdo-dhimashadii labaad ee ku dhacday Xujeyda bishan gudaheeda. Wiish kusoo dumay duleedka Xaramka ayaa sababay dhimashada 109-qofood kahor Xajka.
Hadaba, Himilonews.com, halkan waxay idin kugu soo gudbinaysaa tirada huban ee ilaa hadda warfidiyeenka laga hayo ee ku aadan dhimashada iyo dhaawacyada laga diiwaan-galiyay Xajka.
Masar—55-dhimasho ah. Waxaa kale oo jira 120 Xujey Masaari ah oo wali la la’yahay iyo 26-dhaawacyo ah oo wali la dabiibayo.
Turkiga—tiradii ugu danbeysay ee laga helay xukuumadda Turkiga waa saddex dhimasho ah oo Xujey Turki ah.
Nayjeeriya—54 dhimasho ah ayaa loo diiwaan-galiyay Xujeydii ka timid Nayjeeriya halka 61 dhaawacyo ah oo Xujeyda Nayjeeriyaanka ah lagu dabiibayo isbitaalka guud ee Makka.
Bangaladesh—18 dhimasho ah iyo 90 kale oo Xujeydii ka timid Bangaladesh ayaa wali la la’yahay.
Bakistaan—42 dhimasho ah iyo dhaawac gaaraya 33 dhaawacyo ah; waxaase wali la la’yahay 63 Xujey ah.
Tuniisiya—2 dhimasho ah.
Marooko—shan dhimasho ah.
Iiraan—in-ka-badan 136 dhimasho ah iyo 340 Xujey oo wali la la’yahay.
Hindiya—35 dhimasho ah.
Somalia: 8 (warbixinada idaacadaha)
Tanzania: 5, ku dhawaad 50 ayaa wali maqan.
Previous: Muslimiinta Afrikada Dhexe oo waayo adag ku sugan
Next: Dhallaan Soomaaliyeed oo markab dushiisa lagu dhalay